FlyersRights: tsy maintsy raisina ny fepetra manalavitra ny fitsangatsanganana an'habakabaka
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » FlyersRights: tsy maintsy raisina ny fepetra manalavitra ny fitsangatsanganana an'habakabaka
Ny fandrahonana fiovaovan'ny COVID-19 dia mety hanemotra tanteraka ny fanarenana ny dia an-habakabaka
FlyersRights dia nanambara ny drafitra fandosirana ny fifindra-monina ara-tsosialy sy ny fikorontanan-tsaina
Ny drafitra dia hampirisika ny mpandeha maro handeha amin'ny fiaramanidina azo antoka sy lavitra ny fiaraha-monina
Ireo masoivohom-panjakana federaly sy ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia tsy niraharaha ny fampiharana ny lalàna momba ny fanalavirana sosialy
Rahampitso, FlyersRights.org dia mamoaka drafitra fandehanana ara-tsosialy sy fitsangatsanganana an-tserasera.
Tamin'ny andro faharoa niasany dia niantso ny DOT sy ireo masoivohom-panjakana federaly hafa hikaroka politika fanampiny mba hahatonga ny fitsangatsanganan'ny rivotra ho azo antoka mandritra ny areti-mifindra coronavirus. Na izany aza, ireo masoivohom-panjakana federaly sy ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia tsy niraharaha ny fampiharana ny lalàna manalavitra ny fiaraha-monina. Io volavolan-drafitra manalavitra ny fiaraha-monina io dia azo heverina ara-bola ary hampirisika ny mpandeha maro handeha amin'ny fiaramanidina azo antoka sy lavitra ny fiaraha-monina.
Raha tsy raisina ny fepetra manalavitra ny fiaraha-monina dia mety hanemotra mafy ny fanarenana ny dia an-dranomasina ny fandrahonana ny fiovan'ny COVID-19, hanalava ny satan'ny mpiasan'ny volony, ny fiaramanidina tsy miasa ary antso fanampiny ataon'ireo kaompaniam-bola ho an'ny vola fanampiana avy amin'ny federaly.
FlyersRights.org no fikambanana mpandeha fiaramanidina lehibe indrindra. Miaro ny zon'ny mpandeha sy ny tombontsoany izy io, misolo tena ny mpandeha ao amin'ny Komity mpanolotsaina momba ny fiaramanidina FAA misahana ny fiarovana ny rivotra, ary mitazona birao misy mpiasa ao Washington, DC